Ahụike na -enweghị oke na onye isi nri Bobby Chinn wepụtara igwe ojii Gourmet ọhụrụ nwere ahụike
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ahụike na -enweghị oke na onye isi nri Bobby Chinn wepụtara igwe ojii Gourmet ọhụrụ nwere ahụike
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Akwụkwọ akụkọ USA
Caretù Ahụike Borderless, onye ọsụ ụzọ zuru ụwa ọnụ na teknụzụ ahụike, mgbasa ozi, nkwukọrịta, ọdịnaya, yana ọrụ, ewepụtala Delicious.Health, igwe ojii na -emekọ ihe ọnụ nke izizi n'ụwa. Mụ na onye mmekọ, onye isi nri mba ụwa Bobby Chinn, ọrụ ọhụrụ a ga-ewepụta igwe onyonyo igwe onyonyo nke igwe ojii maka ndị isi ebe ọ bụla n'ụwa iji mepụta mmemme esi nri nke ha.
A na-atụ anya ka ụdị nri ọhụrụ a ga-erute usoro ahịrị dị ugbu a na klaasị nri ịntanetị.
Ndị na -eri ihe na -achọsi ike ugbu a ịmụta ka esi esi nri dị ụtọ dịkwa mma.
Mgbanwe nri, ahụike na teknụzụ na -abawanye na -egosi nnukwu ohere na -emezughị maka ụlọ ọrụ ile ọbịa.
Dr Wei Siang Yu, onye isi oche na onye nchoputa Borderless Healthcare Group na -akọwa, "Ikwenye ndị osi nri ka ha na ndị ọkachamara ahụike na ọtụtụ nde ndị na -arụ ụlọ kọwaa ezi nri ha. “A na-atụ anya ka ụdị nri ọhụrụ a ga-erute usoro ahịrị dị ugbu a na klaasị nri ịntanetị. Anyị nwere obi ike na ndị na -azụ ahịa ugbu a na -achọsi ike ịmụta esi esi nri dị ụtọ nke dịkwa mma. ”
"Enwere m obi anụrị ịbụ akụkụ nke ihe na-atọ ụtọ. Ahụike iji nri nri na mmụta sayensị sayensị jikọọ nri ọka gourmet dị ka ụdị ọhụrụ nke" meditainment "nke Borderless Healthcare Group butere ụzọ," Chef Bobby Chinn kwuru.
Dabere na nyocha ahịa, ahịa nri ahụike na ahụike ụwa yana kichin igwe ojii na ahịa nnyefe nri n'ịntanetị ga -eru ọnụ ahịa atụmatụ ruru ijeri $ 394.75 site na 2028. Ka ndị na -azụ ahịa na -eleba anya na nhọrọ ahụike na nri ụlọ, Borderless Healthcare Group na -amata. njikọta nri na -eto eto, ịdị mma na teknụzụ na -enye nnukwu ohere na -emezughị maka ụlọ ọrụ ile ọbịa.
Delicious. Ikpo okwu na-enye azịza e-commerce agbakwunyere maka ụdị nri iji soro ndị isi na-emekọ ihe na imepụta ahụmịhe nri ebe ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụta ngwaahịa egosipụtara na Delicious.Health. Emebekwara ya iji nye ndị ahịa ohere isoro ndị isi siri ike na-esi nri na ịkwado ụdị nri dị mma iji bulie ahịa omnichannel siri ike. Delicious.
N'ime ọnwa atọ na -abịanụ, Delicious.Health ga -ebupute ọrụ maka ndị osi nri ka ha na -ebipụta usoro nri nri gourmet ahụ siri ike. Ndị isi na-esonye ga-ebunye plọg ọhụrụ na teknụzụ egwuregwu iji mee ihe ngosi nri nke ha ma ọ bụ ihe omume ịntanetị. Ndị ahịa nwere ike ịdebanye aha na Delicious.Health isonye na mmemme ịntanetị dị iche iche. Mwepụta nke Delicious.Health bụ nzọụkwụ mbụ nke ka igwe ojii ọhụrụ a nwere ike isi kwado ọchịchọ nke ndị osi nri ka ha bụrụ oke nri nri omnichannel.
Delicious.Health ga-eji mmemme osi nri na-arụrịta ụka ihe oriri na-atọ ụtọ, gụnyere usoro ya na onye isi nri Bobby Chinn iji nyere ndị ọhụrụ aka ịmalite ndị ọkwọ ụgbọ ala TV ha. Bobby Chinn eguzobela onwe ya dị ka nnukwu nri nri gafee Eshia na Middle East, site na ịnabata usoro ihe nkiri TV "World Café Asia" na Discovery TLC wee bụrụ ihe na-adịgide adịgide na MBC's "Top Chef Middle East", otu n'ime Ihe oriri na -ewu ewu na -egosi na Middle East na North Africa.
Mmelite ndị ọzọ na mmemme imekọ nri ọnụ maka ndị na-azụ ahịa ga-adị na na -atọ ụtọ. ahụike.
Banyere Group Healthcare Group
Tọrọ ntọala na 2008, Borderless Healthcare Group (BHG) bụ onye ọsụ ụzọ zuru ụwa ọnụ na akụ na ụba ahụike nke ndị ahịa ebe teknụzụ, ọrụ, ọdịnaya, mgbasa ozi, ngwaahịa na sayensị data na-emekọrịta ihe n'ofe sistemụ gburugburu ụwa nke otu azụmaahịa sitere na ahụike, afọ ndụ. , ahụike, nri nkenke, teknụzụ, mgbasa ozi, ụlọ akụ, ọrụ igwe ojii, ọgụgụ isi, ile ọbịa na itinye ego. Ọtụtụ n'ime atụmatụ BHG bụ nke mbụ ụwa na ọtụtụ ebumnuche iji mebie ma ọ bụ gbanwee nkesa na usoro nlekọta ahụike dị adị. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na ebe a.
Banyere Chef Bobby Chinn
A na -amata Bobby Chinn ozugbo dị ka onye mgbasa ozi, onye isi nri na onye ọbịa nke nnukwu aha "World Café". Ọ bụ ugbu a ihe na-adịgide adịgide na “Top Chef Middle East” ma na-akwado “Nọgidenụ Dị Mfe” nke bidoro na 2020. Na njem ya na onye isi nri, onye edemede na onye na-ahụ maka nri mba ụwa, Bobby eguzobela onwe ya dị ka ihe ndabere nke ọwa nri zuru ụwa ọnụ. netwọkụ na amaara ya dị ka ọkachamara na nri Eshia na Middle Eastern. Bobby bụ onye na -akwado ya adigide, ihe oriri sitere na osisi ma na-enwe obi ụtọ ịgwọ efere ọhụrụ iji gosipụta agụụ ndị a. Ọ na -egosipụta mgbe niile dị ka onye ọbịa ọbịa na ihe oriri na -amasịkarị ụwa ma soro ndị mmadụ dị ka Keith Floyd, Martha Stewart, Anthony Bourdain, Antony Worrall Thompson na Andrew Zimmern. Bobby rụkwara ọrụ dị ka onye nnọchi anya njem nlegharị anya Vietnam na EU. More gbasara Bobby Chinn.